September 26, 2020 adminLeaveaComment on ओलीले फाईनल गरे मन्त्रिहरुको नाम, यी हुन् ओलीका रोजाईका मन्त्रीहरु !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृ`त्वमा रहेको सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी भएको छ। ओली निकट एक नेताका अनुसार पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहबाट र ओलीले साविक एमाले घटकबाट नयाँ मन्त्रीको अनुहार पनि खोजी सकेका छन् । मापद`ण्डमा भने दुई अध्यक्षले गृ`हकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वएमालेबाट गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेम आले, यज्ञराज सुनुवार, लिला श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, वि`रोध खतिवडा आदिको नाम च`र्चामा छ ।
डा. खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्ला`हकार नियु`क्त गरेपछि अ`र्थमन्त्रीसरह उनको भूमिका हुन्छ । उहाँको ह`स्ताक्षर चल्दैन । नी`ति, योज`ना, कार्यक्रम उहाँकै ला,गु हुने हो,” उनी भन्छन्, डा. युवराज खतिवडा सल्ला`हकारको भूमिकामा आइसकेपछि अ`र्थमन्त्री बन्ने चा`हना पनि घटेको छ । प्रहार न्युज बाट साभार